Britain Oo Kadigtay In Mali Ay Noqoto Sida Soomaaliya
Home Somali News Britain Oo Kadigtay In Mali Ay Noqoto Sida Soomaaliya
Xoghayaha arimaha dibadda UK Willam Hague, ayaa sheegay in wadamada reer galbeedka ay ka shaqaynayaan in dalka Mali uusan noqon dal fashilma sida Soomaaliya oo kale.
Willam Hague, ayaa waxa uu sheegay in wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa kujira gaashaan buurta NATO, ay si taxadar le hula socdaan waxa ka dhacaya wadanka Mali, waxaana uu sheegay ineey kahor tagayaan in wadankaas uu noqdo sida Soomaaliya oo kale.
Willam Hague, waxa uu sheegay in wadamada reer galbeedka ay cashiro ka qaateen xaalada Soomaaliya oo ay hada aad ugu xooganyihiin kooxda Al-shabaab oo iyada xiriir toos ah la leh Al-qaacida, kuwaasoo dagaal kala soo horjeeda doowlad kasto oo Soomaaliya loo dhiso.
Willam Hague, ayaa intaas ku daray in wadanka Faransiiska iyo xulufadiisa reer galbeedka ineey xooga saari doonaan ineey fashilanto doowlada Mali.
“Inkasta oo ay adagtahay in laga hor tago ama la wiiqo kooxaha ka curtay bariga iyo galbeedka Afrika, hadana waxa aan qaadi doonaa tallaabooyin aan wadanka Mali uga bad baadineeyno, waxaana u mari doonaa wadada aan u marnay Soomaaliya, sida dib u dhiska iyo taageeda doowlada” ayuu yiri Wiliam Hague.
Shirkii sanadkii hore ee 2012 kadhacay magaalada London islamarkaasna arimaha Soomaaliya looga hadlay, ayuu Willam Hague xusay ineey kadhalatay in Ciidamada AMISOM ay ku guuleeystaan in qaybo badan oo kamid ah bartamaha iyo koofurta Soomaaliya ka saaraan Al-shabaab, sidokale waxa uu sheegay in shirkaas ay Soomaaliya ka heshay xiriir diblomaasiyadeed oo dhamaystiran.
Dhibaatada wadamada qaarada Afrika ku yaal oo Soomaaliya ugu horeeyso ayuu Willam Hague tilmaamay ineey sabab u ahayd hubka sida sharci darada ah kusoo gala kaasoo si khalad ah gacanta ugu galay kooxo uu ku tilmaamay Argagixiso.
Soomaaliya oo doowladnimadeeda bur burtay sanadkii 1991-dii, xiligaas kahorna uu ahaa dal haybad iyo ixtiraam ku leh dalalka gobolka iyo qaarada Afrika oo dhan ayaa waayadan safka hore laga galiyay wadamada fashilmay oo ay hareeyeen, dagaalada, Musuqmaasuqa, argagixisada, iyo wax walboo xumaan lagu tilmaami karo.
Laakiin Soomaaliya maanta waxaa kajira doowlad rasmi ah, dastuur, waxaana hadda doowlado badan ay Safaaradahooda kafurteen Caasimada Muqdisho, halka kuwo kale sida Mareeykanka, UK iyo Italy ay ballan qaadeen ineey dib uga furayaan Safaaradahooda, taasna waxaa lagu tilmaami karaa guul usoo hoyatay umada Soomaaliyeed.